Tojo, tanoran’ny « internat » teo aloha, mpahandro miroso makany amin’ny maha matihanina | Grandir à Antsirabe
Tojo, tanoran’ny « internat »* teo aloha, mpahandro miroso makany amin’ny maha matihanina
Tojononiaina, na « Tojo » no anarany. Tanora noraisina tao amin’ny kilasimandry na ny « internat » * Grandir à Antsirabe taloha izy. Eto dia mifampizara amintsika ny tantarany izy amin’ity resadresaka ity.
*Ny kilasy mandry na ny « internat » dia nandray an-tanana ireo zanak’olona tena sahirana izay tetikasa nataon’ny Grandir à Antsirabe teo aloha. Nifarana tamin’ny taona 2016 io tetikasa io ka nisolo ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizy Miaina eny an-dalambe (PPER). Manao fanaraha-maso ny fiainan’ireo tanora ireo hatrany ny fikambanana.
Tovolahy avy amina fianakaviana sahirana i Tojo. Ny reniny no nitaiza azy. Vao tamin’ny faha 13 taonany dia efa niditra tamin’ny sehatry ny asa sahady ny tovolahy kely. Tsy karamana vola fa karama vary masaka. Nanampy tamin’ireo asa aman-draharaha tamina tokatrano iray.
Tamin’ny 2008, nandondom-baravarana tao amin’ny Grandir à Antsirabe ny reniny. Nanankina azy ireo ny fandraisana an-tanana ny zanany
Lazao anay ary Tojo hoe inona ny fiovana nisy teo amin’ny fiainanao regefa tonga tao amin’ny Grandir à Antsirabe ianao ?
Niova tanteraka ny fiainako. Afaka nianatra ampilaminana ahy. Nilalao toy ny ankizy rehatra. Nahazo namana mitovy amiko. Tsy nanirery aho fa notiavina. Anisan’ny nanamarika ahy tamin’izany ihany koa ny fifaneraserana tamin’ireo vazaha maro be.
Niaina toy ny fianakaviana izahay tao amin’ny « internat » : mandray anjara amin’ny raharaha madinika toy ny mahandro sy manadio trano sy ny fandaminana. Nanokatra ny lalana ho amin’ny ho aviko sy namolavola ahy ny fiainako tao amin’ny Grandir à Antsirabe.
Mpahandro ao amin’ny hôtel « Couleur Café » ianao amin’izao, mba zarao aminay hoe ny lalanao nahatonga anao tamin’izany ?
Rehefa nahavita fianarana aho dia nanao andran’asa (stage) momba ny mécanique-auto. Tsy tody hatramin’ny farany tamin’io anefa aho noho ny aretina lamosina sy lohalika izay efa nitaiza ahy. Tsy maintsy nitady asa hafa aho hianarako ahafahako miatrika ny ho aviko. Tadidiko tsara fa tamin’izaho mbola tany amin’ny « internat » dia toerana anisany tena tiako ny ao an-dakozia. Satria nahoana hoy ianao ? tiako ny mahandro ! Noho izany rehefa nijanona tamin’ilay andran’asa momba ny « mécanique-auto » aho dia tapa-kevitra ny hanao ny zavatra tiako, mahandro, ho asako.
Dia nandeha ny fikarohana. Farany noraisin’ny hotely « Couleur Café » hanao andran’asa tao aho. Dia nianatra sy nanaraka ny toromarika rehetra. Tapitra ny 9 volana, fotoana tsy ninkelezan’aina fa nikirizana tokoa dia voaray hiasa tao aho, vaovao tsara aoka izany ! Tena faly aho satria tiako ny asako. Fanampin’izany dia afaka manapy ara-bola ny reniko sy ireo irai-tampo amiko aho.
Rehefa afaka nisidina irery amin’izay aho dia nandao ny « internat » Grandir à Antsirabe ny oktobra 2015. Alahelo tokoa no nisarahana tamin’izany. Nahoana tokoa moa no tsy alahelo nisaraka tamin’ireo namana izay noraisina toy ny irai-tampo sy ireo mpanabe izay nitaiza sy nanampy? Tsy maintsy nisy ny ranomaso.
Hary elatra ka lasa nisidina, arabaina ! Manao ahoana kosa ary ny mahakasika ny asan’i Tojo e ?
Tsy manana toerana raikitra ao an-dakozia. Indraindray mahandro, indraindray, manao mofo : azo lazaina hoe « polyvalent » aho. Ankoatra ny asako ao dia manao « traiteur » amin’ireo fety na hetsika mila izany aho. Tena ahafahako mianatra zavatra maro ny asako.
Efa 4 taona ianao izay no tao amin’ny « Couleur Café » ! manana vina hafa ve any ho any ?
Mazava ho azy ! te hifototra bebe kokoa amina asa tena aho, mahandro ihany, fa ho hita eo hoe hanao ahoana.
Misy hafatra ary ve tiana hampita amin’ny ankizy e ?
Ie, tena mila miasa mafy sy mila fikirizana satria tsy mora ny fiainana, mila ezaka be izany. Mahereza dia aza adino ny mivavaka !
Misaotra indrindra Tojo tamin’izay fifampizarana nataonao izay ! Mirary soa sy fahombiazana amin’ny ketriketrika ho atao !
Lire aussi : ...lasa izao
MG	Portrait/ Toky, olon’ny tsiky sy ny hehy